China Otu esi akwado mmechi nke igwe anaghị agba nchara valvụ rụpụta na ụlọ ọrụ | Okporo ụzọ
Etu ị ga - esi hụ na arụmọrụ akachasị nke igwe anaghị agba nchara
Iji hụ na arụmọrụ akara nke igwe anaghị agba nchara bọọlụ mgbe nrụgide na-arụ ọrụ dị ala, a ga-akpụrịrị nrụgide nrụgide tupu bọọlụ na oche akara ahụ. N'ime oche mkpuchi siri ike, ntụkwasị obi na ndụ ndụ nke valvụ nchara igwe anaghị agba nchara na-ejikọ nhọrọ ziri ezi nke oghere ntinye nke oche akara ahụ.
Ndabere na ọrụ ndụ nke igwe anaghị agba nchara bọl; mwekota nke pre-tightening ego nke ezi nhọrọ nke akara oche. Enweghi ike ịgbachi ike enweghị ike ịgba mbọ hụ na nrụgide dị ala nke valvụ bọọlụ: oke buru ibu ga-eme ka mgbatị dị n'etiti bọọlụ na oche akara ahụ bawanye, na-emetụta ọrụ ọrụ nke valvụ igwe anaghị agba nchara; ma nwee ike ibute nrụrụ plastik nke oche akara ahụ, na-ebute ọdịda akara. Banyere oche oche PTFE, nrụgide a kapịrị ọnụ ga-abụkarị 0.1 PN ma ọ bụghị ihe na-erughị 1.02 MPa.
A na-emezi mgbanwe nke oche mkpuchi siri ike nke oche ahụ na-agbanwe agbanwe site na ịgbanwe ọkpụrụkpụ nke mkpuchi mgbazi. Njehie nhazi nke mkpuchi gasị akara ga-emetụta nsonaazụ nke mgbanwe ahụ: akụrụngwa nwere ezi uche na ịhazigharị bụ isi ihe iji nweta arụmọrụ nsị magburu onwe ya. Na-arụ ọrụ, mgbe ejiri akara akara, ikike ngbanwe ike nke preload kpọmkwem nsogbu dị nnọọ njọ, ya mere ndụ ndụ nke ihe nkwụnye ihe mgbochi oche na-adịghị mma.
Otu n'ime ụzọ isi merie nsogbu ahụ bụ ịhọrọ oche mkpuchi na ihe na-agbanwe agbanwe. N'oge a, nnweta na nhazi nke ego a na-eme ka ọ sie ike anaghịzi adabere na mgbatị akara akara ahụ kama ọ na-emecha ya. Na mgbakwunye na ịnweta ihe dị mkpa iji mee ka ọ sie ike, oche oche ahụ na ihe ndị na-agbanwe agbanwe nwekwara ike ịkwụ ụgwọ nrụgide a kapịrị ọnụ n'ime ụdị mgbanwe ahụ na-agbanwe. Ya mere, ndụ ọrụ nke valve bọl ahụ dịtụ ogologo.
Igodo nke akara nke igwe anaghị agba nchara bọọlụ dị na nhazi nke oche akara na nhọrọ nke ihe mkpuchi oche. Dị ka usoro dị iche iche na ngwa chọrọ si dị, jiri ezi uche họrọ usoro nhazi nke oche akara iji hụ na teknụzụ nhazi dị mma nke oche akara: họrọ ihe mkpuchi akara yana ọrụ dị mma yana ngwa ọdịnala chọrọ iji mezuo akara akara nke valve bọọlụ na ọganihu ịdabere na itinye n'ọrụ nke bọl valvụ na-arụ ọrụ Oge ndụ bụ ihe dị mkpa na atụmatụ ndozi bọl valvụ.